AU-da oo si deg deg u soo magacaabaysa wakiilka Soomaaliya | KEYDMEDIA ONLINE
AU-da oo si deg deg u soo magacaabaysa wakiilka Soomaaliya
Midowga Afrika, ayaa sheegay in si deg deg ah loo soo magacaabi doono, Wakiilka Sare ee Golaha Nabadda iyo Amniga ee Midowga Afrika, u qaabilsanaan doona Soomaaliya.
ADDIS ABABA, Itoobiya – Sida ku cad war ka soo baxay Guddoomiyaha Midowga Afrika (AU) Moussa Faki Mahamat, waxaa sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo magacaabi doonaa Wakiilka Sare ee Golaha Nabadda iyo Amniga ee Midowga Afrika, si uu arrimaha doorashooyinka Soomaaliya ugala shaqeyo Ergeyga Gaarka ee Xoghahay guud ee Qaramada Midoobay, James Swan.
Guddoomiyaha Guddiga Midowga Afrika, Moussa Faki Mahamat, ayaa ugu horreyn soo dhoweeyay go’aanka Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ee ah dib ugu laabshada Heshiiskii 17-kii Sebtember 2020 oo saldhig u ahaa doorashooyinka soo socda.
Moussa Faki, wuxuu u mahad celiyay dhamaan saamileyda siyaasadda, sida dhamaantood uga go’antahay in dib loogu laabto heshiiskii 17-kii September, una ajiibeen baaqyadii uga yimid Beesha Caalamka.
“Guddoomiyuhu wuxuu mar kale ku celinayaa baaqa ah in si deg deg ah loogu laabto geedi socodka wadahadalka iyo wada-xaajoodka. Wuxuu u xaqiijinayaa Soomaaliya taageerada firfircoon ee AU iyo Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM) ee geeddi-socodkan”, Ayaa lagu yiri warka ka soo baxay Faki.
War Saxaafadeedkaan ka soo baxay Midowga Africa waxaa gababadiisa lagu xusay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo magacaabi doono Wakiilka Sare ee Golaha Nabadda iyo Amniga ee Midowga Afrika, kaas oo doorashooyinka dalka kala shaqeyn doona James Swan.